သမိုင်းထဲက ရက်စွဲများ...: မတ်လ (၁၇) ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ တပ်ထွက်မိန့်ခွန်း ၆၃နှစ်မြောက် အမှတ်တရ
Posted by ခွန်မြလှိုင် at 10:22 AM
I appreciate the historical insight this blog brings to the internet community about Myanmar.
Furthermore, I would like to invite you to join the Myanmar Wikipedia community. If you have any questions, feel free to ask me.
ပြီးတော့ မျှတတဲ့ တွေးခေါ်မှု့ကလည်းလေးစားစရာပါပဲ။
တစ်ဖက်သတ်မဆန်တဲ့အတွေး ကို ကြိုက်တယ်။
ကျနော်တို့ မသိရသေးတာတွေ ဖတ်ခွင့်ရတဲ့အတွက် အတိုင်းမသိ ဝမ်းသာမိပါတယ်ခင်ဗျား။ဒီလိုလေးတွေစုစည်း
ရာများကို များများဖြန့်ဝေပေးနိုင်ပါစေလို့ မျှော်
အခုလို နှိုင်းယှဉ် ပြချက်လေးက သိပ်ကို ကောင်းပါတယ်။
နောင်လည်း မှတ်သားစရာ မိန့်ခွန်းလေးများကို ယနေ့ ခေတ်
အခြေနေနဲ့ နှိုင်းယှဉ် တင်ပြပါဦးလို့ တောင်းဆိုပါတယ်။